Doorashooyinkii Baarlamanka ee dalka Masar oo maanta oo isniin ah loo dareeray. – Radio Daljir
Doorashooyinkii Baarlamanka ee dalka Masar oo maanta oo isniin ah loo dareeray.
Nofeembar 28, 2011 12:00 b 0
Qaahira, Nov, 28 – Dadweynaha dalkaasi Masar ayaa maanta oo isniin ah u dareeray doorashooyinka baarlamanka ee dalkaasi , waxana doorashooyinkaasi noqonayaan kuwii ugu horeeyey tan iyo markii la riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Xusni Mubaarak bishii February.
Kumanaan banaanbaxayaal ah ayaa weli cabashooyin ka sii wada fagaaraha Taxriir, waxana ay dalbanayaan in golaha militeriga ah ee dalkaasi maamula uu awooda dalka ku wareejiyo maamul rayid ah, waxana maanta ay noqneysaa maalintii 10-aad ee banaanbaxyada ka soo cusboonaaday dalkaasi Masar.
Dhinaca kale, qaar ka mid axsaabta iyo awoodaha siyaasadda ee dalkaasi ayaa ku baaqay in muddo 2 asbuuc ah dib loo dhigo doorashooyinka, islamarkaana la soo afjaro kala qaybsanaanta dalka ka jirta.
Madaxa golaha sare ee militeriga ee dalka Masar Marshal Maxamed Xuseyn Dandaawi ayaa ka digay cawaaqib-xumada ka dhalankarta , haddii aan la soo afjarin mashaqada ka taagan dalka.
? Masar waxa ay maraysaa marxalad Muhiim ah ,markaa weynu guuleysan Siyaasad ahaan ,dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan ama cawaaqib-xumada ayaa noqndoonta mid xun oo inaka hor-itaagaysa in aynu guuleysano? sidaas waxaa yiri Xuseyn Dandaawi.
Marshal Dandaawi ayaa ugu baaqay murashaxiinta madaxtinimada ee dalka Masar ee Maxamed Al-Baraadici iyo Caamir Muuse in ay tageeraan reysalwasaaraha militerigu magcaabay ee dalkaasi ee Kamaal Janzuuri.
C/rashiid Muuse Siciid
Radio Daljir Boosaaso. http://daljir.com/
Baahin: Salaasa, Nov 29, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Afhayeenka baarlamaanka federaalka oo lagu eedeeyey ku xad gudub & ku tarki fal xileed; Wafti reer Puntland ah oo ka qayb galay shirkii ururada bulshada rayadka ah ee Road-mapka oo ku soo laabtay Garowe; Garaad C/llahi Cali Ciid ayaan ka waraysanay; R/wasaare Gaas oo kulamo la yeeshay madaxda dalka Qadhar; afhayeenka xukuumada ayaan ka waraysanay.
Baahin: Axad, Nov 27, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Safiirka Eretrea ee Kenya oo beeniyey in dawladiisu ay taageerto Al-shabaab; Ciidanka badda ee Puntland oo qabtay 9 burcad badeed ah, soona bandhigay maxaabiista & agabkoodii; Maxkamada ciidanka qalabka-sida ee federaalka oo dhegaysatay dacwado rag ka tirsanaan Al-shabaab.